Marqaan News Agency » TOP NEWS+DAAWO VIDEO: Xisbiyada Soomaaliand oo isku Fahmi Waayay Doorashada+Gacantana iskula Tagi Gaaray
* HALISTA DAAHSOON *
Dhacdooyinkaasi waa aftidii lama filaanka ahayd ee dalka UK looga codeeyay in uu ka baxo gebi ahaan Midowga Yurubta iyo doorashadii uu si filan waaga ah ugu soo baxay ninka la yidhaahdo Donald Trump. Waxaa fajiciso ka dhigay in aftidaasi iyo doorashadaasi ay ku suuroobeen ololooyin ku salaysnaa cunsuriyad cad, been qayaxan iyo shucuur casabanimo ee ay muujiyeen siyaasiyiin, saxaafiyiin iyo shacabka caddaanka Ingiriiska ee dhaladka ah. Waxaa uu caalamku ku naxsaday in haddii ba ay taasu labdan da ka suurowday ay dunidu ku waa bariisatay nidaam caalami ah oo cusub ee kana duwan kii saaxiga ahaa, waxaana loogu magac daray casriga beentu run noqotay ee “post-truth era”. Halista ka imanaysaa waa maxay?
Halista ka dhalanaysa ee aan anigu u soo xiganayo dadkayga Soomaaliyeed waxaa weeye in:
Waxa aynu ka dheefi doonnaa waa ciid la sumeeyay, cuntada sumeysan ee GM loo yaqaanno, hub faro badan oo dalka lagu soo daayo, baddeena oo sunta halista ah ee nuukliyarka lagu shubo, jariif kii hore ka sii ba’an, maleeshiyo beeleed la isku hubeeyay, kheyraadka dalka oo la daldasho, xanuunno aan la aqoon oo dalka ka dillaaca, caruurta curyaaman oo ay dhalmadoodu badato, abaaro daba dheeraada iyo baahi baahsan. Adduunyadu haatan isbeddel weyn baa ku yimid oo waddamadii iyo shirkadihii xumaa ee awal Galbeedka ka baqi jiray dabo ka dadan maayaan. Dagaallo na waa laga cabsi qabaa in ay kala dhex maraan Ruushka iyo dalalka Midowga Yurubta isku baheystay ee ay Sweden ku jirto. In aynu midnimadeenii soo ceshanno oo tuugadan Hargeysa iyo Xamar ba dalkeenii xaraashay is ka qabanno si jiritaankeena dambe ayay dantu oogu jirtaa. Adduun waa isbeddelay.